Dardaaranku waa mid aan shaqsi ahaaneyn, is-dhaqdhaqaaqa, xor ah; isha awooda, laakiin maahan lafteedu awood. Da 'kasta oo aan la tirin karin, Allabariga Weyn wuxuu Yahay.
Vol. 2 MARCH, 1906. No. 6
Xuquuqda, 1906, by HW PERCIVAL.
WILL (pisces) waa astaanta laba iyo tobnaad ee Zodiac.
Laga soo bilaabo aasaaska hore ee aan la soo bandhigin muujinta amar ka-goynta ayaa ah: mooshin (taurus) wuxuu keenaa walxo isku-dhafan (gemini) inay u muujiso laba-labo inay tahay arrin ruux ahaaneed; Maskaxda waxa ku hawl gala neefta weyn (kansarka) oo ku neefsata badda noloshu (leo); Baddii noloshu waxay ku baxdaa oo ay u baxdaa qaab (budgo); iyo qaabku wuxuu ku baxaa galmada (maktabada). Iyada oo la horumariyo galmada ku-lug lahaanshaha arrimaha-ruux ahaantu waa mid dhameystiran. Marka galmada la horumariyo, maskaxda (kansarka) ayaa qofka gala. Qaabka isbeddelka ayaa ah: jinni-ahaanta jinsi (maktabadda) waxay horumarisaa damaca (scorpio) qaab ahaan (virgo); rabitaanku wuxuu ku kobcayaa fikirka (sagittary) ilaa nolosha (leo); fikirku wuxuu ku baxaa shakhsiyad (xidid) neefsi (kansar); shaqsiyaddu waxay ku kacdaa nafta (aquarius) iyada oo loo marayo walaxda (gemini); Naftu waxay ku kortaa dardaaranka (pisis) iyada oo loo marayo dhaqaaq (taurus). Wuxuu noqon doonaa Miyir-beel (xanuun).
Dardaaran la'aan Dardaaranimadu waa mid guud. Dardaaranku waa mid kala-qaybsanaan ah, oo aan la-isku-hallayn karin. Waa isha iyo asalka xoogga oo dhan. Dardaaranku waa wax walba yaqaan, xigmad badan, xigmad leh, oo waligiis jira.
Wuxuu awood u siinayaa wax kasta oo bini'aadminimo ah sida ay u adeegsanayaan, laakiin ma aha awood.
Dardaaranku wuxuu ka xor yahay dhammaan dammaanadaha, xiriirada, xaddidaadda, ama isku xirnaanta. Dardaaran waa bilaash.
Dardaaranku waa mid aan shaqsi ahaaneed ahayn, oo aan cid gaar ahayn, aan xadidnayn, is-dhaqdhaqaaq leh, aamusan, kaligiis ah. Dardaaranka waa la joogaa dhammaan diyaaradaha, wuxuuna awood u siiyaa hay'ad kasta iyadoo loo eegayo iyada oo loo eegayo dabeecadeeda iyo awooddeeda adeegsiga. In kasta oo awood u siinayo aadanaha awood ay ugu dhaqmaan sida ay ugu kala horreeyaan tayadooda, dabeecadooda, rabitaankooda, fikirradooda, aqoontooda, iyo xigmaddooda, weligood waligood xor ayey ahaan doonaan oo daboolnaan doonaan dabeecadda fal kasta.
La’aantiis waxbana waa suura gal. Isugu amaahi doona hawl kasta iyo hawl kasta. Dardaaranka lama xadidin, kuma koobna, kuma xirna, mana xiiseynayo, sabab kasta, sabab, hawlgal, ama saameyn. Dardaaranku waa sixir barar iyo wax qarsoon.
Dardaaranku waa u xor sida qorraxda oo wuxuu lagama maarmaan u yahay ficil kasta oo sida qorraxda qorraxdu u tahay koritaanka, laakiin ma dooran doono midka awood u siinaya wax aan ahayn iftiinka qoraxda ee go'aaminaya shayga uu ku dhici doono. Qorraxdu waxay u ifkartaa waxkasta oo aan ugu yeedhnay wanaag iyo xumaan, laakiin qorraxdu uma iftiimin iyada oo ujeedkeedu yahay wanaag ama xumaan. Qorraxdu waxay keeni doontaa bakhtigu inuu faafo belaayo iyo dhimasho, oo wuxuu kaloo u horseedi doonaa dhulka macaanku u soo bixiyo carruurteeda. Qorraxdu iyo caafimaad qabow, lamadegaanka engegan iyo dooxada bacriminta ah, geedaha dhimashada iyo miraha caafimaadka qaba, waa hadiyado qorraxda.
Dardaaranku waa isha xoogga leh ee u oggolaanaysa inuu gacankudhiigluhu ku dhufto dharbaaxada dilaaga ah, iyo sidoo kale isha xoogga u saarta qofka inuu sameeyo ficil kasta oo naxariis leh, jimicsi maskaxeed ama jimicsi, ama is-bixin. Amaah ugu yaboohso qofka ugu yeeraya in la istcimaalo, lafteeda ayaa ka xor ka ah ficilkeeda xoogga. Kuma koobna ficilka iyo ujeedada ficilka, laakiin waxay isu deynaysaa labadaba si khibradda, iyo natiijada ficilku, ficilku uu ku yimaado aqoonta ugu dambeysa ee saxda iyo falka khaldan.
Waa khalad aad u weyn in la yiraahdo taasi waa la sii xoojin karaa sida ay dhihi laheyd inaan iftiinka qorraxda siin karno. Dardaaranka ayaa ah isha xoogga maadaama qorraxdu iftiin u tahay. Dadku waxay u isticmaalaan si xor ah sida ay u isticmaalaan qorraxda, laakiin ninku wuu garanayaa sida loo isticmaalo si xikmad leh xitaa xaddiga kayar inta uu yaqaan sida loo isticmaalo iftiinka qorraxda. Waxa ninku sameyn karo oo dhan waa inuu ogaado sida loo diyaariyo, ka dibna loo diyaariyo aaladaha loo adeegsado qorraxda ama rabitaanka. Qorraxda qorraxdu waxay qaybisaa xoog badan oo xoog leh taas oo ninku isticmaalo qayb yar oo keliya, maxaa yeelay isagu ma haysto ama ma uu yaqaan sida loo diyaariyo aaladda loo adeegsado, iyo sababta oo ah isagu ma yaqaan sida loo isticmaalo si xikmad leh. Dardaaranka ayaa ah isha weyn ee awoodda oo dhan, laakiin aadanaha ayaa u adeegsada heer aad u xaddidan maxaa yeelay ma haysto qalab wanaagsan, maxaa yeelay isagu ma yaqaan sida loo isticmaalo doonista, ama sida loogu diyaariyo aaladda loo adeegsado.
Diyaaraddeeda iyo diyaaradda dhaqaaqaysa, waa midab la'aan oo aan shaqaysnayn; dayuuradda walxaha iyo nafta guud (gemini –ka aquarius), waxay awood u siineysaa walaxda inay ku kala duwanaato shay-ruux, iyo nafsadda si ay u ilaaliso, u midooto, uguna allabarito wax walba; diyaaradda neefta iyo shaqsiyeedka (kansarka –dhuufta), waa awooda neefsashada si ay waxkasta u keento muuqaalka, waxayna awood u siisaa shakhsiga inuu noqdo is-ogaansho iyo wax aan dhiman karin; diyaaradda nolosha iyo fikirka (leo - sagittary), waxay u saamaxdaa nolosha inay dhisto oo jabiso qaababka, waxayna awood siisaa fikradaha inay soosaarto natiijooyinka la doonayo iyadoo loo eegayo waxyaabaha uu doorbido; dusha diyaaradda qaab iyo rabitaan (virgo – scorpio), waxay awood u siisaa qaab si ay u ilaaliso jirka, midabka, iyo muuqaalka, waxayna awood siineysaa inay u dhaqmaan sida ay indha indheeyaan; dusha diyaaradda galmada (maktabadda), waxay awood u siineysaa inay soo saarto qaababka, isu geynta, isku-dheellitirka, isu-dheellitirka, transmute, iyo hoos-u-dhigida dhammaan mabaadi'da aadanaha iyo adduunka.
Binu-aadamku wuxuu leeyahay jidhkiisa jidh ahaaneed agabka iyo awoodaha lagama maarmaanka u ah inay helaan shay kasta, oo ay noqdaan wax kasta, xoog, ama ilaah, dhammaan adeegsiga ficilka sixir ee rabitaanka.
Qof kasta oo bani aadam ahi ma aha hal nin oo keliya, laakiin waa isku darka toddobo nin. Mid kasta oo ka mid ah raggaasi waxay xididdadiisa ku leeyihiin mid ka mid ah toddobada xubnood ee jirka jirka ah. Ninka jirka ahi waa kan ugu hooseeya uguna culus toddobada. Toddobada nin waa: Ninka guud ee jirka; ninka qaabka leh; ninka nolosha; ninka hamiga; ninka caqliga leh; ninka nafta leh; ninka doonista. Muuqaalka muuqaalka ninka ayaa ah mabda'a seminal ee jirka jirka. Mabda 'seminal mabda' ahaan waa mid xor ah oo aan lala xiriirineynin waxyaalaha loo adeegsado sidoo kale waa mabda'a caqliga leh ee doonistiisa xoogga ay ka timaado.
Markasta oo lagu neefsado (kansarka), neefsigu wuxuu kiciyaa, habka dhiigga, rabitaanka (Scorpio) inuu ku kaco. Markii xaruntani kiciso, qofka caadiga ah, fekerka waxaa curyaamiya damac, kaas oo badanaa xakameeya fikirka, iyo rabitaanka (pisces), fikirka la socda, wuxuu xoojiyaa rabitaanka waxqabadka. Markaa waxaan helnaa odhaah ahaan: 'gadaal ayaa laga doonayaa rabitaan,' taas oo salka ku haysa xaqiiqada midab la’aanta iyo shaqsi ahaanta, iyo in, in kasta oo aan daneyneynin natiijooyinka fal kasta, ay tahay isha isha waxqabadka; taasna si loo kicinayo ficil dardaaran, nin xaaladdiisa haatan jira waa inuu damacaa. Haddii, si kastaba ha noqotee, fikirku uusan raacin soojeedinta rabitaanka, laakiin taa beddelkeeda uu raalli ka yahay damac ka sarreeya, xoogga rabitaanku waa inuu markaa raacaa fikirka, oo waxaa loo qaadaa inuu noqdo. Saddex-geesoodka rabitaanka-neefsiga (kansarka-scorpio-pisces), wuxuu ka socdaa sambabada, xubnaha galmada, madaxa, habka lafdhabarta. Zodiac runtii waa qorshaha dhismaha iyo horumarka adduunka iyo wax kasta ama dhammaan toddobada nin.
Mabda 'seminal mabda'a ayaa ah dhex jirka jirka kaasoo laga wada shaqeyn karo guud ahaan, fursadaha iyo helitaanka nin waxay kuxirantahay isticmaalka mabda'daas. Dhimasho la'aan ayaa lagu gaartaa jirka. Kaliya inta jidhku ku nool yahay, dhimashada ka hor intuusan dhiman, ayaa ninku noqon karaa mid aan dhiman karin. Geerida jidhka ka dib qofna ma dhiman doono, laakiin waa inuu ku soo noolaadaa dhulka jidh cusub oo bini aadam ah.
Haddaba, si uu u dhinto, ninku waa inuu cabbaa "elixir of Life", "biyaha aan dhiman karin," "nectar ilaahyada", "Biyaha macaan ee Amrita," "casiirka soodheer", sida ay tahay loogu yeedhay suugaanta kala duwan. Waa inuu, sida ay xeeldheerayaasha cilmu-nafleyda u dhigaan, ay heleen “dhagxaanta falsafadda,” oo loo adeegsado biraha saqafka lagu beddesho dahab saafi ah. Waxaas oo dhan waxaa loola jeedaa hal shay: qofka maskaxda ku haya, iyo mabda'a seminal ee isaga kobciya. Tani waa wakiilka sixirka kaas oo natiijooyinka oo dhan lagu soo saaro. Mabda 'seminal mabda'a waa is-dhaqdhaqaaqa, nafta-soo nooleynta, maskaxda-xoojinta, rabitaanka-gubashada, nolosha-dhisidda, sameynta, awoodda taranka jirka.
Waxaa jira alchemized laga soo bilaabo wareega afaraad ee fikradaha afarta cunnada loo qaado jirka (eeg tifaftirka “Cunto,” Word The, Mugga Aniga, No. 6), maskax-nin. Wuxuu ku barbaaray kuna dhismaa mabda 'seminal', kaas oo ah wax la doonayo. Si loo dhammaystiro natiijadan dhisitaanka maskaxda, oo ah sixir, waxa kale oo dhan waa inay u hoggaansamaan mabda'a seminarka; dhammaan ficillada nolosha, ujeeddada laga leeyahay hoos u dhigidda fikirka hoose; iyo, sidaa darteed, waa inaan loo yeerin mabda'a seminarka si loo amaaho awooddiisa inuu ku biiro ama u bato. Dabadeed caalamku wuxuu sameyn doonaa xasilloonida iyadoo loo marayo rabitaanka, jirka maskaxdaas oo noqda mid is-miyir leh; dhimasho la’aan; kahor dhimashada jirka. Habka ficil ee loogu talagalay ardayda waa in laga fikiro dib-u-dhigid kasta ee xarumaha sare ee jirka, ilaa fikradaha halkaa ka jira ay xudun u yihiin. Mar alla markii fikradaha lagu soo jiito rabitaan xarumaha hoose, fikradaha waa in si dhakhso leh kor loogu qaadaa. Tani waxay dhistaa maskaxda-qofka waxayna si toos ah ugu yeeraysaa doonista xagga sare, halkii ay u oggolaan lahayd in rabitaanka xaga hoose lagu dhaqaajiyo. Dhabarku wuxuu taagnaan doonaa damac, laakiin doonista ka sarraysaa way sii taagnaan doontaa. Qofka ku hanuuniya Jidka Wanaagsan wuxuu sameeyaa sharci cusub; isaga ayaa amarku isbeddelaa; Isaga: doonistiisa ayaa ka sarreysa.
Shuruud kasta oo horumar dhab ah laga gaadhaa waa go'aan qaadasho adag in qof kasta oo bani aadam ahi leeyahay xaq iyo awood uu wax ku doorto, inuu ku dhaqmo si waafaqsan caqligiisa, isla markaana xadka kaliya ee ficilkiisu uu yahay jaahil.
Xigmad yar oo muuqata oo aan lahayn fikrad cad oo ah waxa ay dhab ahaantii ogyihiin, dadku waxay ka hadlaan xorriyadda iyo aayaadka. Qaar ayaa leh ninku wuxuu leeyahay doonis xor ah, halka qaar kalena ay sheegaan in doonistu aysan xor ahayn, taasi waxay noqonaysaa kuliyad ama tayada maskaxeed. Dad badani waxay caddeeyaan in maanka iyo wixii kale oo dhan ay yihiin ka shaqaynta masiirka; in wax waliba ay yihiin sida ay yihiin sababta oo ah waxa loogu talagalay inay ahaadaan; in wax waliba mustaqbalka ay noqon doonaan uun waxa horey loo ballamay oo loo qorsheeyay in lagu noqdo dardaaran ka sarreeya, awood, daryeel, aayaha, ama Ilaah; iyo in, iyada oo aan lahayn cod ama doorashada arrinta, waa in nin soo gudbiyaa.
Xorriyadda weligeed lama gaari karo qof aan si qaldan u dareemin in rabitaanku xor yahay. Qofka rumeysan in dhammaan lagu qasbay inay ku kacaan falal ay ka go'an tahay wixii uu doonayay ee aan ahayn waxa lagu xukumaa oo lagu xakameeyo niyadda dabiiciga ah ee ka timaadda damaca muuqda ee ku xidha addoonsiga. In kasta oo nin rumeysan yahay inuusan lahayn awoodda xulashada ama “rabitaanka xorta ah,” majirto suurtagalnimada inuu ka baxo mawqifkiisa deg-degga ah ee dabeecadda hoos yimaada xakameynta iyo xakameynta damaca.
Hadday run tahay taasi waa xor; ninkaasi wuu awoodaa; in dadka oo dhami ay xaq u leeyihiin iyo awood ay wax ku doortaan; sideen ula heshiin karnaa hadalada? Su’aasha ayaa ku xirnaa, dabcan, waxa ninku yahay; maxaa noqon doona; iyo aayaha ay tahay. Waa maxay nin iyo waxa uu yahay, waan aragnay. Haddaba, waa maxay masiirku?
Mooshinka keena sababa kala-sooca koowaad ee walxaha isku wada mid ah ee noumenal adduunka aan la soo bandhigin ee loo neefsanayo muujinta xilli kasta oo horumarineed, waxaa lagu go'aamiyaa rabitaanka iyo fikirka iyo aqoonta iyo xikmadda iyo doonista xilligii ka horreeyay ee isbeddelka, iyo in mooshinkani yahay mid dhammaystiran. oo aan lagu beddeli karin ficilkiisa illaa qiyaastii isla heer ama marxalad horumarineed ayaa la gaarey sidii ay ahayd xilligii korniinka hore. Tani waa qaddar ama aayaha. Waa xaashida isu-dheellitirka koonteenna iyo xisaabta wareegii hore ee isbeddelka. Tani waxay qusaysaa adduunka ama dhalashada nin.
Waqtiga iyo goobta dhalashada; duruufaha deegaanka; taranka, iyo awoodaha aasaasiga ah iyo xiisaha jirka; waa masiirka, duubista ama xisaabta dabeecada, taas oo ah dhaxalka dabeecadda dadaalkii hore iyo waaya-aragnimadeedii hore. Wadarta guud waxay noqon kartaa mid la aqbali karo ama aan la isticmaali karin. Waxay leedahay xaashi isku dheellitiran oo laga bilaabayo oo ay ku xalliso xisaabaadka hore. Jirka iyo awoodaha jirku waa aayaha taas oo ah inay xaddidaan ficilka maskaxda, ilaa xisaabaadka laga xalliyo. Markaa, majiraan baxsad, miyaanay jirin wax ikhtiyaar ah? Waxaa jira. Xulashada waxay kuxirantahay sida uu u aqbalo una adeegsado aayahiisa.
Dadku gebi ahaanba wuu iska dhiibi karaa oo iska dhaafi karaa talooyinka dhaxalkiisa, ama wuxuu ku aqbali karaa inay soo jeediyaan wixii ay mudan yihiin, oo uu go'aansado inuu beddelo. Horumar yar ayaa laga yaabaa in la arko marka hore, laakiin wuxuu bilaabi doonaa inuu qaabeeyo mustaqbalkiisa sidii uu horey u qaabeeyay haatan.
Xilliga doorashada waa daqiiqad kasta oo fikirka laga fikiro. Wadarta guud ee fikradaha waqtiga nolosha waa aayaha ama dhaxalka jisiga mustaqbalka.
Dadku ma yeelan karaan ama isticmaali karaan si xor ah oo aan isagu iskiis xor u ahayn, isla markaana ma jiro qof xor ah oo ku xidhan ficiladiisa ama natiijooyinka falkiisa. Dadku xor buu u yahay oo keliya heerka uu ku kaco isagoon ku xirnayn ficilkiisa. Ninka xorta ahi waa midka had iyo jeer wax uqalma, laakiin aan ku xirnayn ficilkiisa iyo natiijada ficilladiisa.
Dardaaran, laftiisa, ayaa go'aamiya oo doorta goorta uu doonayo inuu miyir yeesho, laakiin marna duruuf kasta oo kale ama xaaladdu ma xiiseyneyso, ama dooranayso, ama go’aamin doonta, waxa ay yeeli doonto, in kasta oo ay tahay isha kaliya ee awoodda taas oo awood siisa dhammaan. Ujeeddooyinka ficil oo keena natiijooyinka ficilada.
Tafaftiraha bogga Foom (Word The, Mugga Aniga, No. 12) waxaa la yiri waxaa jira labo wado oo kaliya: wadada wacyiga iyo wadada qaababka. Si taas loo helo waa in hadda lagu daro: damacgu waa jidka qaababka; dariiqa loo maro waa miyirka.
Dardaaranku waa ilaaliye abuuraha aan jeclayn oo dib-u-abuuraha wax kasta. Waa isha kaliya ee aamusnaanta dhammaan ilaahyada oo dhan da 'kasta oo ay ku jirto wada noolaansho aan xadidneyn. Dhamaadka isbeddel kasta ama xilli weyn oo muuqaal ah, waa dhaqaajinta dhaqdhaqaaqa guud oo xalliya wax kasta oo loo adeegsado walax asal ah, oo soo jiidata qayb kasta oo ka mid ah diiwaannada ficilladeeda muujinta; walaxuna waxay sii haysataa aragtidan xitaa sida dhulka qabow uu u ilaaliyo jeermiga qarsoon. Waxa kale oo ay noqon doontaa, bilowga muujinta kasta oo weyn, in sida is-dhaqdhaqaaqa, ay u keento dhaqdhaqaaqa ugu horreeya ee walxaha iyo dhammaan jeermiga inay u soo baxaan nolosha iyo ficilka.
Dardaaran waa Dhawrnimada Weyn ee weligeed ah oo lama tirin karo. Waxay leedahay awood ay ku garto nafteeda iyo inay noqoto miyir qab, laakiin waxay weligeed ku sii waartaa jaranjarada kor u qaada oo qayb walboo arrin ah ay ka gudbi karto dhammaan heerarka kala duwan ee aqoonta iyo aqoonta iyo xigmada iyo awooda iyo ugu dambeyntii, is-doorbidid, si ay u noqdaan Damiin.